Etu esi wụnye Google Play Store na Amazon Fire HD ọ bụla na-enweghị mgbọrọgwụ | Gam akporosis
Manuel Ramirez | | Gam akporo Root, Noticias, Mbadamba gam akporo, Gam akporo Ndị aghụghọ, Nkuzi
A na-emelite nkuzi a dika nke June 1, 2020
Mbadamba Amazon rere ha dika donuts, ihe fọrọ nke nta ka mbadamba ihe ndị China, ebe ọ bụ na ha malitere ha ihe karịrị otu afọ gara aga. Mbadamba ụrọ nke na-enye nnukwu arụmọrụ maka mmeputakwa nke ọdịnaya niile nke ọdịnaya ọ bụla yana na ọnụahịa ha nọ, Fire HD 8 nke ntinye a dị ugbu a na € 99.99, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịzụta otu maka ezinụlọ dum.
Otu n'ime obere nkwarụ nke mbadamba ndị a, ọbụlagodi nwere ụdị ndụdụ nke gam akporo, bụ na anyị enweghị ike ịnweta Playlọ Ahịa Google, ebe ọ nwere ụlọ ahịa Amazon. Storelọ ahịa a adịghị njọ ma ọlị, mana ọ nweghị ọtụtụ ngwa na nnukwu ọdịnaya niile Google raara nye gam akporo na-enye. Ọ bụghị ihe niile furu efu, ebe ọ bụ, ọ bụrụ na ị nwere mbadamba Fire HD si Amazon, ịnwere ike ịwụnye installlọ Ahịa Google ma ọ bụrụ na ị na-agbaso usoro niile dị n'okpuru ma ọ bụ vidiyo emere maka otu. N'agbanyeghị, ị gaghịdị enwe mgbọrọgwụ ma ọ bụ jiri iwu ADB.
Etu esi etinye Google Play Store na Amazon Amazon HD ọ bụla
N'ime nkuzi a na vidiyo m jirila Amazon Fire HD 8 nke m ugbua Enwetara m mmetụta mbụ m n'oge dị mkpirikpi. Nkuzi a O adabara maka mbadamba ọkụ Amazon ọ bụla, ọ ga-abụ ihuenyo 7 'ma ọ bụ ọgbọ ọhụrụ 8 ″ 9th Tablet Fire, ya mere, ka anyị gaa n'ihu.
para wụnye APKs chọrọ, ọ bụ ezie na ọ bụghị ọrụ, ebe ị nwere ike ịpị site na ngosi ngosi na nbudata nke otu, anyị ga-etinye Njikwa Ihe Njikwa ES dị na ụlọ ahịa Amazon. Onye nyocha ọ bụla ọzọ ga-eme.
Ugbu a, anyị ga-agaru Ntọala> Nche na arụsi ọrụ ike wụnye ngwa ọdịnala site na isi mmalite
Ihe ndia bu budata APK niilesa ahụ e wụnye ha ka anyị na-ebudata ha n'usoro anyị na-ebudata ha:
Onye njikwa akaụntụ Google 7.1.2 (gam akporo 6.0+)
Nhazi Google Ọrụ 9 (Android 9.0+)
Ọrụ Google Play 20.18.17 (000300-311416286) (000300)
Playlọ Ahịa Google Play 20.3.12-niile  [PR] 312847310 (nodpi) (Android 4.1+)
Na nke a ị ga-enwe ngwa Google niile na gụnyere ọrụ niile metụtara gaa egwuregwu. N'ụzọ dị otú a ị nwere ike ịnweta nnukwu akwụkwọ ntanetị nke ngwa site na mbadamba nkume nke na-enye nnukwu ahụmịhe dịka m kwuru. Ọzọkwa, echefula ngwa nke kpọọ ụlọ ahịa n'efu na ị nwere ike nweta ụbọchị ọ bụla ma ọ bụrụ na ị gara na ngalaba onyinye anyị kwa ụbọchị.
Ewepụla m Playlọ Ahịa Google. Kedu ka m ga-esi tinye ya ọzọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Etu esi wụnye Google Play Store na Amazon Fire HD tablet ọ bụla na-enweghị mgbọrọgwụ ma ọ bụ ADB
Life Ma batrị ga-ebelata nke ukwuu 😉
Zaghachi El Davo
Na mgbanwe inwe ngwa niile ịchọrọ, ezigbo ahia! Daalụ
Ndewo, ọ bụrụ na m wụnye ọrụ Google, ọ na-emetụta ọrụ Amazon?
Ekele, ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma na firé hd8 ″ 2020 nke na-ekwu na ọ naghị arụ ọrụ ịgbaso usoro otu n'otu ka ha si pụta na nkuzi ahụ, ahapụfela nke ọ bụla, naanị ihe na-anaghị arụ ọrụ bụ itinye ụdọ ma ọ bụ keyboard, nke ahụ bụ na ndabara adịghị ajụ oyi, onye maara onye na-arụ ọrụ na ọkụ ọhụrụ nkuzi nke ndị gara aga anaghị arụ ọrụ na nke ọhụrụ m gbalịrị ha.
Grey pusi dijo
Ndewo, enwere m ajuju. M nwere version 5.3.3.0 na m na-amaghị ma ọ bụrụ na Google play ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụ na achọrọ m igwu egwuregwu dịka Clash Royal na nsogbu nke ezinụlọ na ndị ọrụ nchekwa ga-arụ ọrụ nke ọma. Ọ na-ada m mgbe niile. Ọrụ ndị ahụ ọ ga-arụ ọrụ nke ọma? Zaa biko. M nwere a Kindle Fire 7 hd. Dị ngwanrọ 5.3.3.0
Zaghachi na Grey Cat
Morningtụtụ ọma, M nwere OS version 4.5.5.2 ọ ga-abụ na ị nwere ike ibudata play ụlọ ahịa na m si n'ihe unu Fire HDX
Daalụ nke ukwuu. Ọ gara nke ọma
Enwere m Kindle turn HD na ụdị sistemụ 7.5.1_user_5170020
Enwetara m faịlụ ndị ahụ, mana mgbe m gbalịrị ịwụnye nke mbụ ọ na-agwa m na mperi parse emeela na ngwugwu ma hapụ m ka m wụnye. Ihe ngwọta ọ bụla?
Were otu ihe ahụ.
Mgbe m meghere google play m jidere na "ịlele ozi". Ihe ngwọta ọ bụla?
Enwere m nsogbu na ọ bụ na m na-ebudata ngwa ahụ na mgbe m chọrọ ịwụnye ya na-eme ka m ghara ịtụle ngwugwu ahụ, enwere m nbudata ahụ site na ebe ndị ọzọ mana ọ meghị ebe ahụ.
Daalụ nke ukwuu, na ọkụ nke 2015 7 ″, ọ dịla egwu, ngwa ngwa ma dịkwa mfe, ọ na-aga nke ọma, enyemaka ndị a nwere ekele.
Laura <c dijo
M na-eme usoro niile mana n'ikpeazụ egwuregwu Storelọ ahịa anaghị apụta na mbido ngwa mbadamba. Kedu ihe m kwesịrị ịme? Daalụ
Zaghachi Laura c
I meela nke ukwuu, ezigbo nkwanye, ọ na-arụ ọrụ na ọkụ hd10
Zaghachi Carlos Eduardo
M wunyela ihe niile mana akara ngosi playstore apụtaghị na desktọọpụ.
M na-aga ngwa ma ọ bụrụ na ọ bụ mana site n’ebe ahụ enweghị m ike imeghe ya.
Kedụ ka m ga - esi mee akara ngosi ahụ na desktọọpụ?
Zaghachi Carles Soler
ndo, i dozie nsogbu gi?
Azụrụ m Fire HD 10 Mbadamba ụrọ site na 9th. Emana, ke Jenụwarị 24; ma enwere m ya n'aka m kemgbe 30. Ma, taa, m na-achọ ihe ọzọ iji wụnye APK ọ bụla na ya, ebe ọ bụ na m gbalịrị ịwụnye Google Play site na ngwa ngwa App nke m nwere, mana ọ mepeghị na m hapụrụ ya otu a ruo taa.
Achọrọ m ma budata ụfọdụ faịlụ m hụrụ na ụfọdụ weebụsaịtị ndị na-ekwu na ha dị mkpa; na m gbalịrị ọtụtụ nsụgharị ma ọ dịghị onye na-arụ ọrụ.
O doro anya na ị nwere ike agaghịkwa na oge a; ma ọ bụ ọ bụrụ na mmadụ gbalịrị ihe ọzọ, biko kọọrọ anyị ya.
Daalụ maka oge gị.
Amara na Udo.
Zaghachi Ramón Telleria
Nye ndị nwere Fire HD 10 nke 9th. Ọgbọ m kwadoro vidiyo a; ebe ọ bụ na ha na-enye faịlụ ndị na-arụ ọrụ na ya.
Ya gaziere unu niile. Daalụ maka oge gị. Amara na Udo.
Enwere m ọkụ 8 mbadamba, ọgbọ 8, OS 6.3.1.5. Ana m akwado ngwa nke amaghi ama. Ozugbo ebudatara ngwa anọ ahụ na Storelọ Ahịa Play, m na-anwa ịwụnye 1st «njikwa akaụntụ», mana ọ naghị arụ ọrụ. Ihe Njikwa Akaụntụ Google gosipụtara na ihuenyo ahụ, ana m eme ya iji wụnye ma "ngwa awụnyebeghị" na-egosi, "ngwugwu ahụ yiri ka ọ rụrụ arụ".
M na-agbalị ebudatara nsụgharị okenye karịa ndị a ngwa na otu njehie.
Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ ga-ahụ, na mbụ m nwere play ụlọ ahịa arụnyere na m uninstalled ya n'amaghị.
Zaghachi jose dominguez
Njikọ nke abụọ anaghị arụ ọrụ
Ndewo Carlos, agbalịrị m njikọ nke abụọ ma ọ na-arụ ọrụ, kedu nke ị na-ekwu maka ya? Echiche kacha mma.
Emechara m usoro niile mana mgbe m meghere obere akpa egwuregwu, ọ na-arapara na «ịlele ozi», gịnị ka m ga-eme ugbu a? O nweela ihe dị ka nkeji iri abụọ na steeti ahụ. Enwere m ekele maka nlebara gị.